Izitshixo zokungakhawulezi indlela yokuphila | Bezzia
Izitshixo zokungakhawulezi indlela yokuphila
UMaria vazquez | 17/11/2021 10:00 | yokuPhila
Olu luntu luyasinyanzela ukuba sihambe ukubaleka ukusuka kwenye indawo ukuya kwenye. Noko ke, ukungxama akuthethi ukuba sicinga ngokukhawuleza, ukwenza izinto bhetele okanye ukunqumla iimbopheleleko zethu ngokukhawuleza. Ngoko kutheni ungazami ukutshintsha izinto?
Sihlala ngokungxama. Sivakalelwa kukuba kufuneka sibe nemveliso, yokwenza into enye emva kwenye nokuphendula imiyalezo ngoko nangoko. Siphupha ngokutya okuzolileyo, usuku lokuphumla kwaye, ngokuqinisekileyo, iiholide, kodwa xa zifika asihlali sikwazi ukuqhawula. Ngaba uziva uchongiwe? Lifikile ixesha lokuba kupheliswe.
Ngaba udibana nomhlobo ngesidlo sasemini kwaye unikele ingqalelo ngakumbi kwifowuni yakho? Ngaba iincoko zakho zihlala zimalunga nomsebenzi, indlela oxakeke ngayo kunye nexesha elincinane onalo? Ngaba awuyazi into omawuyenze okanye uziva kakubi xa uneeyure ezimbalwa zasimahla? Ukutshintsha ukungxama ube yindlela yobomi kudla ngokuza nako uxinzelelo kunye nokuxhalabisa. Kwaye hayi, siyazi ukuba akulula ukutshintsha itshiphu kodwa nazi ezinye izixhobo zokuyenza.
2 Izinto nganye nganye
3 Funda ukuthi hayi
4 Cwangcisa iishedyuli kwaye ukhuphe unxibelelwano
5 Yonwabele into ekuphumzayo
Yintoni ebalulekileyo nengabalulekanga? Ngamnye wethu unomlinganiselo owahlukileyo wamaxabiso kwaye ke ngoko kunokwenzeka ukuba siwuphendule ngokwahlukileyo lo mbuzo. Into ebalulekileyo kukwenza ngokuhambelanayo malunga neyona nto ibalulekileyo kwindawo yakho iphiramidi yezinto eziphambili. Kuba hayi, ayizizo zonke izinto ezibaluleke ngokulinganayo. Ukuzinika ixesha lokucingisisa ngayo nokubeka izinto eziphambili ngokubaluleka kanye njengokuba silungiselela usuku lwethu okanye iveki emva koko ngokufanelekileyo.
Izinto nganye nganye
Zihoye izinto nganye nganye. Ngaba usefowunini nomhlobo wakho? Nikela ingqalelo kwincoko. Emva koko unokuzimasa ii-imeyile eziza kwifowuni yakho okanye wenze uluhlu lokuthenga. Uzohlala phantsi utye? Ziphephe iziphazamiso ngokuthulisa iselfowuni yakho kwaye ukonwabele ukutya kwakho. Beka phambili kwaye unike ixesha kuyo yonke into. Zenze ngendlela yangoku nangengqiqo. Hayi ngokuzingxamela, ngokwenza izinto ezininzi ngexesha elincinane, sizuza usuku.
Funda ukuthi hayi
Eyona nto ibonakala ilula mhlawumbi yeyona intsonkothileyo. Kwizihlandlo ezininzi sibeka kuqala iminqweno yabo basingqongileyo kwezabo. Senza ngenxa yokoyika ukuphulukana nobuhlobo, ukuba abasayi kusibiza kwakhona emsebenzini, ukuba bacinga ukuba sizicingela ... Abanye ngenxa yokuba asiyeki ukucinga ukuba sivakalelwa kukuba, ukuba sinexesha. okanye ukuba siziva sizingca ngokwenza oko. Kwaye ngengcinga nganye enjalo impilo-ntle yethu ngokwasengqondweni ijongelwa phantsi kunye namandla ethu okonwaba.
Cwangcisa iishedyuli kwaye ukhuphe unxibelelwano
Ukumisela imida akukhuthazwa kuphela, kuyimfuneko. Ukumiselwa kwexesha, kwelinye icala, kusinceda siphephe iziphazamiso kunye sigxininise ingqalelo yethu kumsebenzi omnye ezimisele. Chaza iiyure zokusebenza kunye nexesha lokufezekiswa komsebenzi ngamnye ukuphepha ukuba ingqondo ihlakazekile kunye nezinye izinto.
Kwakhona ibeka imida kwiteknoloji. Ukuba nokwenzeka kokunxibelelana ngokuqhubekayo kubangele ukuxhomekeka okunjalo kuthi kangangokuba siziva sinyanzelekile ukuba siphendule yonke imiyalezo ngoko nangoko. Ukukhawuleza kuye kwaba likrele elintlangothi-mbini ekufuneka sifunde ukuhlala kunye. Ukuthulisa izaziso zeselula okanye ukuyigcina kwi-drawer xa kufuneka sinikele ingqalelo kumsebenzi othile okanye umsebenzi othile yindlela yokuqonda ukuba akusiyo yonke into engxamisekileyo, ukuba akukho nto eyenzekayo ukulibazisa izinto. Ngaba uziva unovalo ngokwenza oku? Lungisa ifowuni ukuze kungene iminxeba kuphela evela kubafowunelwa ocinga ukuba kungxamisekile ukuya kuyo.
Yonwabele into ekuphumzayo
Ngaba kukho umsebenzi othile okwenza uzive wonwabile? Hamba uhambe, funda incwadi, uye kwindawo yokuzivocavoca, thetha nomhlobo, yiba nekofu ngokuthula, uhlambe ... Kubalulekile ukuba gcina ixesha kwiveki yonke kwezi zinto kwaye nizixhamle ngaphandle kweziphazamiso. Xa ucwangcisa iveki yakho, phawula ngombala othanda kakhulu elona xesha uza kuzinikezela kubo, inokuba yimizuzu eli-15 ngosuku okanye iyure ngeentsuku ezimbini ngeveki ... kwaye uyinike ukubaluleka kwayo. uye.
Kwaye wena, ngaba uye wenza indlela yokuphila ngokukhawuleza okanye uyayigcina?
Umendo opheleleyo kwinqaku: IBezzia » yokuPhila » Izitshixo zokungakhawulezi indlela yokuphila
Amaqhinga okuvuka kunye nobuso obuhle rhoqo kusasa
Ngaba ukwahlula iqabane luhlobo lokuxhatshazwa?